Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Monday, March 07, 2011 Monday, March 07, 2011 Labels: ရသစာစုများ
ဆီယာတယ်ကနေ ဒါးလက်စ်ကို နောက်ဆုံးထွက်မဲ့ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ကျွန်မ ရောက်ရှိလို့နေပါတယ်.. ခုံတစ်ခုံမှာ နေရာယူပြီးတဲ့နောက် လေယာဉ် ပျံသန်းချိန်အတွင်း လုပ်ရမဲ့ အလုပ်တွေအတွက် ကျွန်မရဲ့ လက်ပ်တော့လေးကို ပေါင်ပေါ်တင်ကာ ဖွင့်ဖို့ လုပ်နေမိပါတယ်။ အဲဒီချိန်မှာ လေယာဉ်ပေါ်ကို ကလေးသုံးယောက်နဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်တို့ဟာ ဆူညံလှုပ်ခတ်စွာ တက်ရောက်လာပါတယ်.. သူတို့ကို ကြည့်ပြီး ကျွန်မထိုင်နေတဲ့ ခုံအနီးတစ်ဝိုက်မှာ လာမထိုင်ဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းလိုက်မိတယ်.. ဒါပေမဲ့ ဆုတောင်းက မပြည့်ပါဘူး။ အမျိုးသမီးနဲ့ လေးနှစ်အရွယ် ကလေးငယ်လေးတို့ဟာ ကျွန်မနောက်က ခုံမှာ ထိုင်လိုက်ပြီး သူမရဲ့ ၁၃နှစ်အရွယ် ကလေးမလေးနဲ့ ၁၁နှစ်အရွယ် ချာတိတ်လေးတို့ကတော့ ကျွန်မဘေးခုံမှာ ၀င်ထိုင်လိုက်ကြပါတယ်.. ထိုင်ပြီးတာနဲ့ တပြိုင်နက် သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ စကားတွေ အပြန်အလှန်ပြောရင်း အငြင်းပွားနေပြီး ယောက်ျားလေးဟာ အငြိမ်မနေဘဲ ခုံပေါ်မှာ တွယ်တက်လိုက်၊ ခုန်ဆင်းလိုက် လုပ်နေပါတော့တယ်။ တခါတခါ ထိုင်ခုံကို ဆောင့်ကန်တာမျိုးတောင် လုပ်နေပါသေးတယ်..
ပြီးတော့လည်း လေယာဉ်ထွက်ပြီး မကြာခင်မှာဘဲ ကောင်လေးဟာ သူရဲ့ အစ်မဖြစ်သူကို “မမ.. လေယာဉ်က အခု ဘယ်ရောက်နေပြီလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မိနစ်အနည်းငယ် ကြာတိုင်းမှာ မေးခွန်းထုတ်ပါတော့တယ်.. သူမေးတိုင်းလည်း သူ့အစ်မ ဖြစ်သူ ကောင်မလေးက “ ပါးစပ်ပိတ်ပြီး တိတ်တိတ်နေစမ်း… ငါလဲ ဘယ်သိမှာလဲ” လို့ စိတ်မရှည်သံ၊ မာကြောသံဖြင့် ပြန်ပြောပြီး မှုန်ကုပ်ကုပ်နဲ့ ထိုင်နေပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ချာတိတ်လေးဟာ အငြိမ်လည်း မနေသလို၊ အလျှော့မပေးဘဲ မိနစ် အနည်းငယ်ကြာတိုင်း အဲဒီမေးခွန်းကိုပဲ ထပ်တလဲလဲ မေးနေပါတယ်။ သူတို့ ၂ယောက်က ဆူရတဲ့အထဲမှာ အနောက်က ကလေးလည်း ငိုယိုနေပါတော့တယ်. အမျိုးသမီးကတော့ အင်မတန်မှ ညိုးနွမ်း စိတ်အားငယ်နေတဲ့ ပုံစံနဲ့ ကလေးငယ်ကို ချော့မော့နေပေမဲ့ အားရှိပုံ မရပါဘူး။ သူတို့ကို ကြည့်ပြီး ကျွန်မမှာ စိတ်တွေရှုပ်၊ ခေါင်းတွေလည်း မူးနောက်လာသလို ခံစားရပါတော့တယ်။
“ကလေးတွေဟာ ဘာမှ နားလည်မှုကို မရှိကြဘူး။ တကယ့် လူဆိုးလေးတွေပဲ..” စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ကျွန်မ တွေးမိပါတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်မှာ လုပ်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားတဲ့ အလုပ်ကိစ္စတွေလည်း ကြက်ပျောက်၊ ငှက်ပျောက် အကုန် ပျောက်ကုန်ပါတော့တယ်။ စိတ်တိုတိုနဲ့ တွေးနေမိတုန်းမှာ ဘေးနားက ချာတိတ်လေးဆီက သူ့အစ်မကို မေးတဲ့ “မမ… ငါတို့တွေ အခု ဘယ်နေရာ ရောက်နေပြီလဲ ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းက ထွက်လာပြန်ပါတယ်..
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Sunday, March 06, 2011 Sunday, March 06, 2011 Labels: စားသောက်ဖွယ်ရာ
ဒီတစ်ပတ်အတွက် အစီအစဉ်က ဒိန်ချဉ်ကြက်သားနှပ်၊ မြေပဲငပိချက်၊ ပဲကြာဇံသုပ်နဲ့ အတို့အမြုပ်လေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြက်သားကို ဒိန်ချဉ်လေးနဲ့ နှပ်တာက လူတိုင်းချက်ဖူးမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ မချက်ဖူးသေးရင်တော့ စမ်းချက်ကြည့်ပါလို့ ညွှန်းဆိုပါရစေ.. အရသာ တစ်မျိုးလေးနဲ့ စားလို့ တကယ်ကောင်းပါတယ်..
ဆား၊ အရသာမှုန့်၊ ဒိန်ချဉ်နဲ့ နှယ်ထားတဲ့ ကြက်သားများ
ပထမဦးဆုံး ကြက်သားကို အနေတော် အရွယ် မိမိနှစ်သက်သလို တုံးပါတယ်။ ပြီးရင် ဆား၊ အရသာမှုန့်၊ ဒိန်ချဉ်( မိမိသုံးမဲ့ ဒိန်ချဉ် ရဲ့ တစ်ဝက် ) နဲ့ နှယ်ပြီး ခေတ္တ နှပ်ထားလိုက်ပါတယ်နော်။
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Friday, March 04, 2011 Friday, March 04, 2011 Labels: ခရီးသွား မှတ်တမ်း
နေပြည်တော်ခရီးသွားပိုစ့်ကို ဆက်ပြီးဖော်ပြရမယ်ဆိုရင် နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့ရှိ ထင်ရှားသော ရေပန်းဥယျာဉ် ဖြစ်ပါတယ်။
တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ထားတာတွေ ပေါင်းပြီး စုစုပေါင်း ၁၆၅ဧက ကျယ်ဝန်းတဲ့ နေပြည်တော် ရေပန်း ဥယျဉ်ဟာ ကလေးများသာမက လူကြီးများပါ ပျော်စရာကြည့်ရှုစရာ အစုံအလင် ရှိပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ရေပန်း ဥယျာဉ်ကို ညနေခင်းမှသာ ၀င်ဖြစ်တဲ့အတွက် နေ့ရှုခင်းအလှကိုတော့ ဓါတ်ပုံမရိုက်ခဲ့နိုင်တာကြောင့် ရေပန်း ဥယျာဉ်ရဲ့ ညအလှကိုသာ ပြန်လည်ဖော်ပြပေးပါရစေရှင်။ မှောင်ရီညချမ်းမှာ ဥယျာဉ်တွင်း ထွန်းညှိထားတဲ့ မီးရောင်တွေကိုသာ အားကိုးပြီး ရိုက်ခဲ့ရတာကြောင့် ဓါတ်ပုံများ ကြည့်ရှုရတာ အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်သီးခံပြီး ကြည့်သွားကြပါလို့လည်း ပန်ကြားချင်ပါတယ်..
ရေပန်းဥယျာဉ်မှာ ရေပန်းရုပ်ရှင်၊ ရေပန်းအက၊ ရေတံခွန်၊ ကြိုးတံတား၊ လူကူးသစ်သားတံတား၊ ရေကန် စသဖြင့် စုံလင်လှပြီး ရုပ်ရှင် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးသူများလည်း လာရောက်ရိုက်ကူးကြတယ်လို့ သိရပါတယ်… မြန်မာပြည်မှာ ပထမဆုံးနဲ့ တစ်ခုတည်းသော ရေပန်းဥယျာဉ်လည်း ဖြစ်တာကြောင့် စိတ်ဝင်စားသူ များပြားကြပါတယ်.. အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က လာရောက်ကြသူများနဲ့ ရေပန်းဥယျာဉ်ရဲ့ ညနေခင်းဟာ စည်ကားလွန်းလှတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပျားပန်းခတ်အောင် ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ လူတွေကြားထဲမှာ ဓါတ်ပုံရိုက်ဦးမလားလို့ လာလာမေးတဲ့ ကင်မရာမင်းတွေကို ဖြေရတာကလည်း အလုပ်တစ်ခုလို ဖြစ်ပါသေးတယ်. ရှောင်လို့ မလွတ်နိုင်အောင်ကိုဘဲ သူတို့တွေက များလှပြီး လာသမျှ လူဦးရေရဲ့ တစ်ဝက်လောက်က သူတို့တွေဘဲဖြစ်မယ်လို့တောင် ထင်ရလောက်အောင် ဓာတ်ပုံဆရာတွေ များလှပါတယ်.. ကိုယ်တွေက ကိုယ့်ဓာတ်ပုံလေး တကြည့်ကြည့်လုပ်ရလောက်တဲ့ အလှပိုင်ရှင်မျိုး မဟုတ်လေတော့ သွားလေရာ ကိုယ်ကသာ မြင်မြင်သမျှ ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပေမဲ့ ကိုယ့်ပုံကိုတော့ ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံဖို့ ၀န်လေးပါတယ်. (မတော် ကိုယ့်မျက်နှာကိုယ် ပြန်လှန့်ပြီး အိပ်မရဖြစ်မှာလဲ ကြောက်ရသေး :) )
ရေပန်းဥယျာဉ် ၀င်ဝင်ချင်းမှာ ပထမဦးဆုံးက ကြိုးတံတားကို သွားလျှောက်ပါတယ်.. လှုပ်ရမ်းနေတဲ့ ကြိုးတံတားပေါ်မှာ လူတွေများစွာ လျှောက်ကြတော့ တံတားက ယိုင်တိယိုင်တိုင်ဖြစ်လို့ လျှောက်ရခက်ရတဲ့အထဲ ပျော်တတ်တဲ့ လူတစ်ချို့က ဟေးဟေးဟားဟား အော်ဟစ်ပြီး ကြိုးတံတားကို ရမ်းသထက် ရမ်းအောင် လျှောက်ကြတော့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေမှာ ဗျာများရပါတော့တယ်.. တစ်ချို့ဆို အသံထွက်ပြီး အော်ဟစ်နေကြကာ အချို့ကျတော့လည်း ကုန်းကုန်းကွကွနဲ့ တရွေ့ရွေ့ ရောက်အောင်သွားကြသလို အချို့ကတော့ တော်ပြီ ရိုးရိုးတံတားကဘဲ သွားလျောက်တော့မယ်ဆိုပြီး ဆင်းပြေးသွားသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
မီးရောင်တွေနဲ့ ကြိုးတံတားကို ခပ်လှမ်းလှမ်းက ရိုက်ချက်
အောက်က ရေပြင်ပေါ်မှာပါ အရိပ်ထင်ပြီး လှနေတဲ့ ကြိုးတံတား
ကျန်ရှိနေသေးသော ပုံများကို အောက်တွင်ဆက်လက် ကြည့်ရှုပါရန်....
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Monday, February 28, 2011 Monday, February 28, 2011 Labels: ခရီးသွား မှတ်တမ်း
ခရီးသွားမှတ်တမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ ဆက်လက်ဖော်ပြမဲ့ အကြောင်းအရာက နေပြည်တော် မြို့တော်သစ်ကြီးရဲ့ ဆာဖာရီ ဥယျာဉ်အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ရက် ပြည်ထောင်စုနေ့ကမှ ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ ဆာဖာရီဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာ ဘာတွေရှိမလဲလို့ တစေ့တစောင်း လေ့လာ ကြည့်ရှုကြရအောင်လားရှင်။ အောက်မှာတော့ ဥယျာဉ်ကြီးကို ပြုပြင်တည်ဆောက်ထားပုံနဲ့ ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာ ရှိတဲ့ အကောင်တွေကို အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပေမဲ့ ကားလမ်းကြောင်းနဲ့ ဝေးတဲ့နေရာ ရောက်နေလို့ မမြင်ခဲ့ရတဲ့ အကောင် တစ်ချို့တလေ ကျန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အားလုံး မစုံလင်တဲ့အတွက်တော့ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါနော်။
ကဲ … ဧက ၃၀၀ကျယ်ဝန်းပါတယ်ဆိုတဲ့ နေပြည်တော်ရဲ့ ဆာဖာရီ ဥယျာဉ်ကြီးထဲကို ကျွန်မနဲ့အတူ လျှောက်သွားကြည့်ရအောင်နော်.. ဘာတွေများ ရှိပြီး ဘာတွေများ တွေ့ရမလဲလို့ ပေါ့….
ဒါကတော့ ဆာဖာရီဥယျာဉ်တွင်းသို့ ၀င်မယ်ဆို စစခြင်း ၀င်ရမဲ့ ဂိတ်ဦးဖြစ်ပါတယ်..
ကားပါကင်မှာ ကားထားပြီးတာနဲ့ အထဲကိုရောက်ရင် မြင်ရမဲ့ မြင်ကွင်းတွေကတော့ အောက်က ပုံတွေ အတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အထဲကိုရောက်ပြီး ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ရှုခင်း
တလူလူလွှင့်နေတာ ဘာအလံတွေလဲ မသိ
အထဲကိုဝင်ရဖို့ စောင့်နေသူများ အတွက် နားနေဆောင်
ကဲလေ အားရပါးရ စောင့်ကြတာပေါ့
ဒီနေရာဟာ ဆာဖရီဥယျာဉ်ရဲ့ အတွင်းထဲကို ၀င်ရောက်ဖို့အတွက် လက်မှတ်ရောင်းချတဲ့နေရာ ဖြစ်သလို ကားလက်မှတ်ဝယ်ဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေကြတဲ့ နေရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်.. ဥယျာဉ်ကြီးမှာ ကားစုစုပေါင်း လေးစီး ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်.. ကားတစ်စီးကို လူ ၂၅ ၂၈ယောက်လောက်သာ စီးခွင့် ရှိပြီး လက်မှတ်တစ်ခါကို ၂၈စောင် (ကားတစ်စီးစာ) စီသာ ရောင်းချပါတယ်.. သူတို့ ဥယျာဉ်က ကားတွေက လွဲလို့ ကိုယ်ပိုင်ကားတွေ ၀င်ရောက်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ကျွန်မ ရောက်သွားတဲ့နေ့ဟာ တနင်္ဂနွေနေ့ ရုံးပိတ်ရက် ဖြစ်လို့လားတော့ မသိပါဘူး။ လူ အင်မတန်များသလို လာတဲ့လူနဲ့ ဥယျာဉ်တွင်း လိုက်ပို့တဲ့ကား အစီးရေ မမျှသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်မှတ်ဝယ်ခွင့်ရဖို့ကို ၃နာရီနီးပါး စောင့်ခဲ့ရပါတယ်။ အထဲကို မ၀င်တော့ဘဲ ပြန်တော့မယ်လို့ စိတ်ကူးမိပေမဲ့ ရောက်လာပြီးမှတော့ မ၀င်ရပဲ အရှုံးပေးပြီး ပြန်သွားတာမျိုး မဖြစ်လိုတာကြောင့် စိတ်ရှည်လက်ရှည် စောင့်ခဲ့ရပါတယ်.. စောင့်နေရင်း ရေဆာတာ မအောင့်နိုင် မအီးနိုင် ဖြစ်ရသေး. ဒါတောင် ဒီအချိန်မို့ပေဘဲ. မတ်၊ ဧပြီလ လောက်မှာသာ လာမိရင် မတွေးရဲဘူး။
ဘ၀တူ ဒီက စောင့်နေသူ များ
လက်မှတ်ရောင်းသူကို မမြင်ရလောက်အောင် ၀ိုင်းအုံနေကြလေရဲ့.. ဒါတောင် လူနည်းသွားချိန်ရိုက်ထားတာ
ဒါကတော့ ဥယျာဉ်တွင်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်.. ကားမှန်တွေကို ခုလို သံဇကာကွက်တွေနဲ့ ကာရံထားပြီး မြင်းကျားလိုလို ကျားသစ်လိုလို ခြယ်ထားပါတယ်.. ဘာကျားလဲတော့ မသိ :) ဒီကားဟာ ကိုယ်စီးရမဲ့ကား မဟုတ်သေးပါဘူး ။ အလှည့်မရောက်သေးပါ။ လက်မှက်တောင် ၀ယ်လို့ မရသေးဘူး။ ဒီတော့ ဆက်စောင့်........
ကျေးဇူးကြီးပါပေတယ်.. ၃နာရီနီးပါးစောင့်ရပြီးချိန်မှာ အထဲဝင်ဖို့ လက်မှတ်ရပါပြီ။
ဥယျာဉ်တွင်းထဲသို့ ၀င်ရောက်ဖို့ဆိုရင် ကားစီးဖို့ လက်မှတ်ခ လူကြီးလက်မှတ် တစ်စောင် ၁၀၀၀၊ ဥယျာဉ်ထဲဝင်ခ ၁၀၀၀ လူတစ်ယောက်ကို ၂၀၀၀ ကျသင့်ပါတယ်.. ကလေးလက်မှတ်ဆို ၅၀၀တဲ့။ ဒီတော့ ၅၀၀ သက်သာလည်း နည်းလားဆိုပြီး “ကျွန်မအတွက် ကလေးလက်မှတ် ၀ယ်ရင် ရမလားလို့ ” လက်မှတ်ရောင်းတဲ့ သူတွေကိုမေးတော့ “အစ်မက သူငယ်ပြန်နေပြီလား” တဲ့ ပြန်ပြောတယ် .. ဟင်းဟင်း ပြောစရာလားနော်.. ခုမှ ၁၆နှစ် ပါဆို။ ၁၆နှစ်က ကလေးမဟုတ်ဘူးလားလို့ :) ပြောင်းပြန်မဖတ်ကြေး ...
ဟော... ဒါ ကိုယ်တွေ စီးရမဲ့ကားတဲ့..
ကဲ .. ဓာတ်ပုံရိုက်လို့လွယ်တဲ့ ပြူတင်းဘေးနား နေရာရအောင် မြန်မြန်တက်ကြစို့
အကောင်ဗလောင် တိရိစ္ဆာန်တွေပုံကို အောက်မှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုပါရန်..